URURADDA KALA DUWAN | Organisationer av och för invandrare och flyktingar
Waxa jira ururro kala duwan sida ururro aan dhaqaale laga raadineyn iyo kuwa dhaqaale laga raadinayo. Koorsadan waxa aynu kaga hadlaynaa shaqada ururrada aan dhaqaalaha laga raadineyn iyo shaqadooda. Waxa aynu u aragno urur badnaa waa urur aan laga raadineyn wax dhaqaale ah kuwaas oo ku dhisan wax ay dadku xiiseynayaan. Taas oo noqon karta ururrada muusikada, ururrada dadka ajanebiga ahi leeyihiin, ururro siyaasi ah, ururrada beeraha, ururrada dhaqanka, ururro u gargaara umadda tabaaleysan/dhibaataysan iwm.
Qaar ka mida ah ururradani waxa ay u dan yihiin bulshada oo waxa ay ku hawlan yihiin ama ay qabtaan wax dan u ah bulshada, sida in kor loo qaado xanaanada iyo korinta caruurta, dadka baahan oo loo adeego, kor uqaadidda cilmi baadhista ama diinta oo laga shaqeeyo, tabarruca la sameeyo, kulanka dadka, farshaxanka, cayaaraha ama dhaqankaba.
Hase ahaatee ururrada calaamadaha goonida ah leh ma aha kuwo iyagu u daneeya bulshada kuwaas oo ay ka mid yihiin ururrada dadka isku xiisaha ah iyo urur kooxeedyadu.
Ururrada aan dhaqaalaha laga raadinayn waxa ay u shaqeeyaan si furan. Sharci u gooni ah ma maraan ururradani, laakiin waxaa saameeynaya sharciyo kale sida haddii ay timaaddo in ay bixiyaan cashuurta waddanka oo kale. Faahfaahin dheeraada ka akhriso:
Xafiiska Cashuurta dalka sharciyadooda cashuurta ee ururrada aan dhaqaalaha laga raadinayn iyo kuwa samofalka
Dad badan ayaa is waydiiya sida loo helo lambarka diiwaangelinta ururka ee looga baahan yahay urur kasta. Lambarka ururka waxa looga baahan karaa marka lala xidhiidhayo bangiyada iyo meela kaleba. Waxa bixiya lambarkan xafiiska cashuuraha sida nambarka qofkasta ay u soo saaraan. Waxa aad la xiriiri kartaa xafiiska cashuuraha ee degmadaada oo kaa caawin doona foomamka la buuxinayo. Foomamka
Ururrada iskaashatooyinka oo lagu tiriyo ururrada aan dhaqaalaha laga rabin waa isutag shaqaaleha degaanka ee isku xirfadda ah oo waliba badanaa isku meel ka wada shaqeeya. Waxaa loo sameeyay in ay dhowraan danaha shaqaalaha meesha ka shaqeeya.
Iskaashatooyinku waxa ay la doodaan ururka lidka ku ah ee ah ururka shaqobixiyeyaasha oo ay ka wada hadlaan xaaladda meesha shaqada, mushaharka iwm. Nolosha shaqadu badankeedu kuma salaysna sharci u gooni ah haddii la barbar dhigo dalalka kale. Laakiin waxa jira dhinacyo sharci u deggan leh, sida sharciga fasaxa oo go’aamiya fasaxyada la qaato, sharciga wadaagga go’aan qaadashada (Medbestämmandelagen) kaas oo sharci u siinaya iskaashatooyinka in ay guddiga maamulka warshadda xubin ku lahaadaan iyo sharciga dhawaridda shaqaalaynta oo go’aamiya sida dadka loo shaqaaleeyo ama loo eryo
Urur dhaqaale raadis ah waxa loo sameeyaa in xubnaha arimahooda dhaqaale kor loogu qaado. Hadaba si sharci ahaan laguugu aqoonsado urur dhaqaale waa in uu ururku ahaado mid iskaashato ah, taas oo micnaheedu yahay in ay jirto isku xidhnaansho dad ikhtiyaarkood isugu biiray iyaga oo wada dhowranaya arimahooga dhaqaale, nololeed iyo xataa baahidooda dhaqameedba.. Dadkaa oo si wada jir ah u wada leh una wada maamula shirkadda.
Wixii tafaasii ah ee intaa dhaafsan waxa aad ka heli kartaa
Xubin ka noqoshada urur
Haddii ay jirto arrin aad jeceshay in aad u dadaasho ku hawl galkiisa waxa aad ku biiri kartaa urur jira, ama waxa aad bilaabi kartaa urur ku saleysan waxa aad xiiseynayso.
Ururradu waxa ay leeyihiin lacag sanadkii la bixiyo oo hadii aad bixisid aad ka mid noqon doonto ururka. Xubinnamada ururku waa mid ikhtiyaari ah. Xubnuhuna iyaga ayaa go’aansanaya shaqada iyo wakhtiga ay galinayaan ururka. Haddii uu qofku ku biiro urur waxa laga sugayaa in uu ka qayb qaato hawsha oo uu shaqada wax ka qabto. Ma dhacdo in uu qof ku qaato lacag shaqada uu u qabanayo ururka ee waxa lagu shaqeeyaa lacag la’aan.
Hadii aanad u heyn wakhti badan shaqada ururka laakiinse aad u aragto waxa uu ururku qabanayo in uu yahay muhiim waxa aad isku qori kartaa xubin taageersan.
Masuuliyada ururku waxa ay dusha ka saaran tahey dhamaan xubnaha ururka. Waa in aanad sugin in uu qof kale u shaqeeyo si adigu aad faaiido u heshid.
Waa in la xiiseeyaa ka qaybgalka oo aad ku dadaashaa sidii hawlaha ururku ay macno u sameyn lahaayeen.
Dhismaha urur cusub
Dalkan Iswiidhan cidkastaa waxa ay dhisi kartaa urur ku salaysan waxa ay xiisaynayaan. Waxaa jira habab la maro sidii lagu gaadhi lahaa waxa la rajeynayo.
Marka ay soo baxdo su’aal dadku xiisaynayaan, waxaa dhacda in dhowr qof ay isku raacaan in ay dhisaan urur cusub. Waxa laga bilaabaa in la iskugu yeedho dadka shir si looga wada hadlo ujeedada laga leeyahey barnaamijka, sharciyada ku meel gaarka ah, qiyaas ahaan sida loo shaqeyn doono iyo cidda la rabo in la wajaho.
Marka guud ahaan la isku raaco waxa uu ka kooban yahey barnaamijku ayaa la go’aan sadaa in la dhiso ururka
Markaa ka dib waxa la doortaa guddi ku meel gaara oo sii wada hawsha.
Guddiga ku meel gaarka ah waxa ay hoggaanka hayaan ilaa shirweynaha koowaad ee ururka, iyaga oo diyaarinaya shuruucda iyo xeerarka ururka, qiyaastii lacagta sanadka la bixin doono iyo waxyaabaha kale ee loo baahan yahay in la qabto. Waxa kale oo ay isugu yeedhaan shirweynaha sanadeedka ugu horeeya.
Shirweynaha koowaad ayaa lagu go’aamiyaa shuruucda ama xeerarka ururka kaas oo xadeynaya barnaamijka ururka.
Ka sii akhriso qormada "Shir sannadeed".